ယောက်ျားတွေကိုဘောလုံးထဲမှာကန်ပြီးသင်၏ခြေဆစ်များကိုချိုးဖဲ့ရန်ပေးဆောင်ခြင်း: DOMINATRIX ဖြစ်ခြင်း - သတင်း
ယောက်ျားတွေကိုဘောလုံးထဲမှာကန်ပြီးသင်၏ခြေဆစ်များကိုချိုးဖဲ့ရန်ပေးဆောင်ခြင်း: dominatrix ဖြစ်ခြင်း
လက်အောက်ခံခြင်း (များသောအားဖြင့်အသက်ကြီးသူတစ် ဦး) သည်သူတို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုလက်ဆောင်များနှင့်ငွေများပေးပို့သည့်နေရာတွင်ငွေကြေးလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။ သကြားဖေဖေတည်ဆောက်ပုံနှင့်မတူသည်မှာငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးကဤဖြစ်စဉ်ကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေသောကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာပေးမှုကိုမမျှော်လင့်ပါ။
အမျိုးသားများသည်သူတို့၏ FinDoms ၏သတိပြုမိမှုကိုခံရပြီးထို့နောက်အရှက်ရရန်တောင်းဆိုကြသည်။ ၎င်းမှာအဝတ်အချည်းစည်းများချခြင်း၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံအဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ ငွေသားစက်များနှင့်ဘောလုံးများတွင်ဘောလုံးကန်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ၀ င်ငွေသည်၎င်းတို့မည်မျှကတိကဝတ်ပြုထားသည်နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်လိုသည်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ထောင်နှင့်ချီသောပေါင်တစ်ချောင်းကိုသင်တက်နိုင်ပြီးအခြားဖြစ်ရပ်များတွင်သင် ၀ ယ်ထားသောအတွင်းခံအဝတ်အစားများကိုပေါင် ၂၀ မှ ၁၀၀ အတွင်းမည်သည့်အတွက်မဆိုရောင်းနိုင်သည်။ တိုတိုပြောရရင်ဘဏ္domာရေးလွှမ်းမိုးမှုဟာတော်တော်လေးကိုသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ fetish တစ်ခုပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ပိုင် selfie watermark ပါတယ်?
ငါဒီကမ္ဘာအကြောင်းပိုသိချင်တယ်။ ရိုးရိုးတွစ်တာသုတေသနလုပ်ပြီးနောက် Huntress Diamond ကိုတွေ့တယ်။ Huntress Diamond သည်တက်ကြွသော dominatrix ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူမနှင့်စကားပြောခဲ့ပြီးသူမ၏အတွေ့အကြုံအချို့ကိုပြန်လည်ပြောပြရန်ပြောခဲ့သည်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Huntress Diamond သည်တွစ်တာတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၀,၀၀၀ ရှိပြီးအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀ ရရှိရန်အနိမ့်ဆုံးကန ဦး အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမအနေဖြင့်လက်ထပ်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတည်ပြုပြီးသူမ၏ခင်ပွန်းကသူမအတွက်အကျိုးရှိသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ Huntress က FinDom ကိုမင်းရဲ့တင်ပြမှုရဲ့ဘဏ္ancesာငွေကိုဘာမှပြန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။
Huntress သည် FinDom ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကတည်ရှိခဲ့သည်ကိုသာတွေ့ခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်တွင်ကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသူမအနေဖြင့်အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခံရသော်လည်းဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသူမ၏ခြေဆစ်များကိုချိုးဖဲ့ခြင်းနှင့်ချိုင်းထောက်များပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းခြင်းအားယဉ်ကျေးစွာငြင်းဆိုခဲ့သည်။
- မုဆိုးစိန်? (@ Diamonddivine0) စက်တင်ဘာ 25, 2018
Huntress သည် ၂၀၁၇ ဇွန် လမှစ၍ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသည်။ သို့သော်သူမ FinDom ကိုမည်မျှချစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအခြားအလုပ်တစ်ခုနှင့်တူသည်ဟုခံစားရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ FinDom ကို Diamond အတွက်“ get rich rich quick” အစီအစဉ်ဟုမထင်ရ။ သူမသည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းမှလေးစားဖွယ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခြင်းသည်ပျော်ရွှင်သည်။ သူသည်အချို့သောတင်ပြချက်များသည်အလွန်လိုအပ်နေကြောင်း၊ နေ့စဉ်ဘဝနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောအစည်းအဝေးများအတွက်အချိန်ယူရန်အခက်အခဲရှိနိုင်ကြောင်းသူမကပြောကြားခဲ့သည်။
Diamond ၏မိသားစုသည်သူမ FinDoms ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိသည်။ သူမသည်လူတို့အားပြောပြရန်ပျော်ရွှင်သည်ထက်သူမတွင်ဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိတော့ဟုခံစားရသည်။
Human ATM wannabes လို့ခေါ်တယ်၊ ငါဟာစျေးဝယ်ထွက်တော့မယ်။ ဘယ်သူ့ကိုယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပြန်ပေးမှာလဲ။ ငါအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးချင်တယ်။
ငါ့ညဥ့်အကောင်းမှတ်စုအပေါ်အဆုံးသတ်? #findom #paypigs #spoiled #efdp #BBR #walletrinse #HumanATM pic.twitter.com/StXJSCRQ9H
Huntress ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူမလက်အောက်ခံတွေဟာအားနည်းနေပုံရတယ်။ သူတို့ဟာအမြတ်ထုတ်နေသလိုခံစားရတယ်။ စိန်ကပါဝင်ပတ်သက်နေသူအမျိုးသားများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်နေသည်၊ မည်သည့်အခါမှမလုပ်ချင်သောအရာများကိုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုခိုင်းခြင်းမခံရဟုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Huntress ၏အဆိုအရ, dominatrix ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ကဒီလမ်းကြောင်းကိုဆင်းအားနည်းချက်လူတွေကိုအတင်းရှာဖွေနေထွက်မသွားဘူး။
အသက် ၆၀ အရွယ်အပျိုစင်ဘဝကကျွန်ုပ်ကိုပင်စင်လစာပေးအပ်ခြင်းကိုသတိပြုမိသည်။ pic.twitter.com/qhBnzKv97d
- အမြှောင် Amba @ (@MistressAmba) စက်တင်ဘာ 19, 2018
သူမသည်တက္ကသိုလ်အဆင့်ရှိ dominatrixing သို့တက်ရောက်သူများအတွက် FinDom အားအကြံပေးပါ့မလားဟုကျွန်ုပ်မေးခဲ့သော်လည်း၊ လူတွေကပိုက်ဆံအတွက်ပဲ ၀ င်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကလူကြိုက်များလွန်းတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လင့်ကစားမိန်းကလေးများစွာသည်ဒီသုတေသနကိုအင်္ဂလန်ရှိတက္ကသိုလ်မှ Dominatrix ကလှူဒါန်းသောအလှူရှင်တစ် ဦး ထံမှ BMW ကိုလက်ဆောင်ပေးကြောင်းကျွန်ုပ်၏သုတေသနကပြသခဲ့သည်။
သူ့ကိုအခြားသေးငယ်သောအလုပ်များအကြားတွင်အိမ်သာတစ်လုံးကိုလျက်စေခဲ့သည်။ ? အမြန် #rinsing လူတန်းစားမတိုင်မီ session တစ်ခု။ ? #findom #paypig #skype #ကျွန် @RTpig @RTmutt pic.twitter.com/OaviGp0E1P
- နတ်ဘုရားမ amille? (@azngxddess) စက်တင်ဘာလ 30, 2016
Huntress Diamond ကကမ္ဘာကြီးကိုငွေရေးကြေးရေးအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ သူမနှင့်သူမ၏ရိုးသားမှုတို့ကိုကျွန်မစာနာမိသော်လည်း၊ ဘဏ္Domာရေးကြီးစိုးမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအနက်အချို့သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်အကျိုးရှိသည်ဟုထင်မြင်မိသည်။
တွစ်တာတွင် FinDom Edinburgh မှရှာဖွေမှုတွင် 'Full Time Brats' နှင့် 'Verified Princesses' တို့သည်ဒေသန္တရ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်အားလုံးသည် Wetherspoons Subs နှင့်အချို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသဘောတူနိုင်သည်ဟုထင်သည်။ မင်းရဲ့ Flatmate မှာမကြာသေးမီကမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ငွေတွေများများစားစားရှိလား။
မိုးလေ ၀ သသတင်း
အဆိုပါဘွတ်ကင်ရုံး - Edinburgh
အခု! #findom #paypig #finsub pic.twitter.com/g4ZRiLQslw
- ဘုရင်မ Kayl? 2.5K? (@queenkayls) စက်တင်ဘာ 2, 2018